(tonga teto avy amin'ny Teny persana)
Afganistana, Bahreina, Irak, Kazakstana, Tajikistana, Ozbekistana,
Azia Andrefana, Azia Anivo
Iranianina Atsimo andrefana
Sarintany maneho ny faritra ahitaa ny mpiteny persana sy fiteny iraniana hafa. Io miloko maitso io ny manandrify ny fiteny persana
Ny fiteny persana na fiteny farsy dia tenim-pirenenan' i Irana, ao amin' ny fianakaviana indô-eorôpeana, ao amin' ny sampana indô-iraniana, ao amin' ny zana-tsampana iraniana. Mahery ny 60 tapitrisa ny isan' ny mpiteny persana any Iràna ary ny any Afganistana misy 16 tapitrisa. Misy mpiteny persana koa ny any Tajikistàna, ny any Bareina ary ny any Ozbekistàna (foko tajiky). Atao hoe فارسی / fārsī ny anaran' ny fiteny persana any Iràna sy any Afganistàna. Endrika arabon' ny teny hoe parsi, ny hoe farsi satria tsy manana renifeo p ny abidy arabo.
((en)) Western Farsi (Languages of the World)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_persana&oldid=999167"
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:17 ity pejy ity.